3rd Kalaw Trail Run 2018 Amateur Marathon Competition was held in Kalaw
Nay Pyi Taw, 11th December
3rd Kalaw Trail Run 2018, in the aim of tourism development, was held at Kalaw Heritage Hotel on 9th December 2018. In the competition, long trail run (21.1) km and short trail run (12) km are included. For the long trail run, 71 foreign visitors and 46 Myanmar people competed and 127 foreign visitors and 107 Myanmar people competed in the short trail run. In the total of 351 international tourists, 198 foreign visitors and 153 Myanmar people competed.
A representative of Pyi Thu Hluttaw, Daw Pyone Kaythi Naing delivered the remark at the 3rd Kalaw Trail Run 2018 opening ceremony. Then Pyi Thu Hluttaw Representative Daw Pyone Kaythi Naing and Director from Directorate of Hotels and Tourism of Shan State Office, U Htin Aung Naing respectively started race by gun, long trail run at 7:00 a.m. and short trail run at 7:15 a.m. Then, they awarded first, second and third prizes for both short trail run and long trail run.
Long trail run starts from Kalaw Heritage Hotel – Church – Say Winkabar Monastery – Hlut Pyin Village – Shwe Taw Kyin – Taung Gyi Shay Village – Myin Ma Hti Village – Foot of Mhine Lone Hill – Buu Tar Street to Kalaw Heritage Hotel and short trail run starts from Klaw Heritage Hotel – west of Say Winkabar Monastery – Yay Aye Pond – Nhee Pagoda – Shwe U Min to Hotel. The runners were secured by Health Department of Kalaw and responsible persons from Myanmar Emergecy Medical Service (M.E.M.S), Tourist Police, MHA, MTGA and Ride Behind Kalaw watched along the trail.
Amateur Marathon Competition was held in December 2016 with 70 players as the first time and held in December 2017 with 300 runners as second time.
International Tourists visit along Ayeyarwady River by Luxury Cruises
Nay Pyi Taw, December 11
As Ministry of Hotels and Tourism is taking efforts of exploring new destinations, visa exemptions in order to develop hotels and tourism sector and to visit comfortably and smoothly for domestic and foreign tourists, international tourists come and visit Myanmar not only by air and waterway but also by their own motor cars, cycles and bicycles through border gates.
Under the supervision of Ministry of Hotels and Tourism and with the arrangement of Upland Travels & Tours Co.,Ltd, (12) Swiss Tourists entered from Mandalay International Airport and visited to famous places of Mandalay-Amarapura-Nwenyein- Kyarnyat- Third Defile– Tagaung- Htichaint Village- Katha- Kyuntaw- Shwegu- Sinkhan Village- Bamaw- Second Defile- Kyautpone Village- Mingun- Sagaing- Shwepyi Thar Village- Bagan- Yangon along Upper Ayeyarwady River by RV Thuragu Exotic Cruise from November (8), 2018 to December (21) and departed from Yangon International Airport in December (21).
Similarly, with the arrangement of this tour company, (11) Swiss tourists arrived Yangon International Airport and visited Yangon-Bagan-Shwepyi Thar Village- Sagaing- Amarapura- Mandalay- Nwenyein- Kyarnyat- Tagaung- Katha- Kyunthaw- Sinkhan Village- Bamaw- Shwegu- Kyautpone- Mingun- Mandalay along Upper Ayeyarwady River by RV Thuragu Exotic Cruise from November (20), 2018 to December(5) and set off from Yangon International Airport in December 5.
As present time is the peak season, international tourists came and visited famous places in order to observe and enjoy beautiful natural scenery and traditional customs and culture of ethnic groups in Myanmar. Travel agency suggested that while visiting destinations, though Kyarnyat Village and Shwepyi Thar Village had beautiful natural scenery and customs of villages four years ago, at present, plastic wastes and charcoals made the natural beauty of these villages ugly.
တယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအုန်းမောင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီးခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်
ရန်ကုန် ၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအုန်းမောင် သည် ယနေ့နံနက် ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ ၊ Pullman Yangon Centrepoint Hotel ၌ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ရန်ကုန်မြို့သည် သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းများ အများဆုံးဆင်းသက် လျှက် ရှိသည့်မြို့တော်တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏အဓိကဝင်ထွက် ပေါက်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ နိုင်ငံတကာခရီးသွားဧည်သည့်များ အများဆုံးဝင်ရောက်သည့် မြို့တော် ဖြစ်ပါကြောင်း ၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှလည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စိတ်ဝင်စား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့် ဝမ်းမြောက်ပါ ကြောင်း ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ အနေဖြင့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးကို လျှင်လျှင်မြန်မြန်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်လည်း မြန်မာနိုင်ငံခရီး သွားလုပ်ငန်းဥပဒေတွင် ဒေသဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ထည့်သွင်းပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနမှလည်း လိုအပ်သည့်ကူညီပံ့ ပိုးမှုများနှင့် ဥပဒေ ၊ နည်းပဒေ ၊ မူဝါဒများချမှတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊မြန်မာ-ဂျပန်ချစ်ကြည်ရေး အတွက်ဆောင်ရွက်မည့် ချယ်ရီပန်းပင်စိုက်ပျိုးပွဲတော်ကို ရန်ကုန်မြို့ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန် စသည်ဖြင့်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၊ ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါ်နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုးမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အ တွက်ဆောင်ရွက်နေသည့် Sunday Market ၊ လာဘ်ကောင်အရုပ်(Mascot)၊ Tourism Brand Name ၊ လက်ခုပ်ကုန်းကမ်းခြေဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ဆောင်ရွက်သွားမည့်ကိစ္စရပ်များကို အကျယ်တဝင့်ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။
ယင်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးအသင်းတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပသွားမည့် Yangon Step 2019 ပွဲတော်ကျင်းပနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတို့အားတင်ပြခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှလိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးပြီးနောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးတို့သည် မြန်မာ-ဂျပန် ချစ်ကြည်ရေးအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်စိုက်ပျိုးမည့် ချယ်ရီပင်များ စိုက်ပျိုးမည့်နေရာနှင့် အခမ်းအနားကျင်းပမည့် နေရာ တို့အား တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူလိုက်လံကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ (၈) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကျင်းပ
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ (၁၀) ရက်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ(၈)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးပွဲကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင် ဒီဇင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ စစ်ကိုင်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဌဖြစ်သူ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီး ဦးစိုးဦး ၊တိုင်းဒေသကြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကေ်ာမတီအဖွဲ့ဝင် ဦးသန်းဌေး ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ၊ ရှေးဟောင်း သုသေတနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မုံရွာတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး သစ်တောဦးစီးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လမ်းဦးစီး ဌာန ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဌ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခရီးသွား လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ စုစုပေါင်း (၁၄) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကေ်ာမတီ ဥက္ကဌ ၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး တိုင်းဒေသကြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကေ်ာမတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးသန်းဌေးမှ “Journey to the North West” Rally/Sagaing2MHTTR 2019 ကားမောင်းပွဲ ကျင်းပမည့် အစီအစဉ်အသေးစိတ်ကို ဆွေးနွေးတင်ပြ ခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ တိုင်းဒေသကြီးခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်သူဦးမှ “ Journey to the North West” Rally/Sagaing2MHTTR 2018 ကားမောင်းပွဲကျင်းပ ခဲ့သည့် အခြေအနေနှင့် “Journey to the North West” Rally/Sagaing2MHTTR 2019 ကားမောင်းပွဲ တွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် အစီအစဉ်များနှင့်ခရီးစဉ် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို တင်ပြခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသူများမှ အကြံပြုဆွေးနွေးကြကာ အစည်းအဝေးအား နံနက် (၁၁း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါကြောင်း သတင်းရရှိ ပါသည်။
International travelers visit by their own vehicles: cars and motor bikes
Nay Pyi Taw, December (10)
Ministry of Hotels and Tourism (MOHT) is arranging the international visitors’ arrivals and departures: not only by air and water but also through the border gate ways to be enabled when visiting in Myanmar. And MOHT also carries out to have smooth and comfortable visits for all the visitors.
By the supports of MOHT and Miraculous Myanmar Travel & Tour Co., Ltd, (12) Thailand travelers with their own vehicles: 1 car and9motor bikes entered from Htee Khee Border Gate and passed through Htee Khee-Dawei-Maung Ma Kan-San Hlan Beach-Shrimp Production Factory (Puzun Lote Ngan)-Pha Yarr Gyi-Dawei on 1st December, 2018 and then departed from Htee Khee Border Gate to Thailand on 3rd December, 2018.
Now, this is the opening season for travelling in Myanmar and Myanmar does many relaxations in every perspective recently to get more visitor arrivals. So, the visitors are now coming to Myanmar by air, water and also through the border gate ways and they visit to the popular destinations in Myanmar.
« First« Prev...10...1819202122...304050...Next »